Ihe anyị ga - eme site na Touch Bar na mmemme Evernote | Esi m mac
Ngwa Evernote emeela mgbanwe dị mma n'ihe gbasara ọrụ ha na-etinye na nke a 2017. N'ime afọ 2016 ọ chọrọ ime ka ọrụ ahụ rụọ na afọ ndị a bara uru, na-eme nsụgharị akwụ ụgwọ, ọ bụghị naanị maka ikike iji ya, kamakwa yana ọrụ ndị ha tinyere. Ha agbaala ọsọ nke ukwuu na ngwa ndị na-asọmpi ha belatara uru ha nwere. Kama nke ahụ, 2017 amalitela nke ọma karị, otu n'ime isi akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ maka ndị ọrụ Mac bụ doo nke ọrụ site na Touch Bar. Banye okwu ahụ, ka anyị hụ ihe Ogwe Aka na-ewetara anyị na usoro anyị na Evernote.
Mgbe anyị nwetara Evernote bụ maka ihe abụọ. Gaa ozi nke anyị meburu ma ọ bụ onye ọrụ kesara anyị, ma ọ bụ mepụta ozi maka ojiji ọzọ. Abụọ ndị a isi ọrụ dị na Aka Ogwe, anyị ga-pịa ike dee ma ọ bụ na iko dị egwu ịbanye ozi anyị na-achọ na kiiboodu.
Otu n'ime ihe siri ike m na-egosi na mmemme ọ bụla na-echekwa ozi, ọ bụrụ ederede, onyonyo, egwu ma ọ bụ faịlụ, bụ eji aha mmado. Ndị a na-enye anyị ohere ịchọta otu ozi ahụ site na eriri eriri ọchụchọ abụọ dị iche iche. Ntụnye aha maka akara anyị ga-apụta ugbu a na Ogwe aka. A na-ahazi ha na mkpụrụedemede, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta akara ahụ, ị ​​ga-pịa pịa slide mkpịsị aka gị site n'aka ekpe gaa n'aka nri ruo mgbe ịchọtara nke ịchọrọ.
Mee ka akụkụ ndị dị mkpa pụta ìhè nke ozi di nkpa. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ụzọ ndị mmepe Evernote si eche. Ya mere, ihe na-eme ugboro ugboro na-agbanwe agba nke ahịrịokwu ma ọ bụ paragraf. Naanị ị ga-emegharị mkpịsị aka gị na agba agba iji chọta agba dị mma.
Na ngwụcha, Evernote nwere nkọwa. Ọ na-enye gị ohere ịka akara onyonyo ma ọ bụ ihe edeturu niile na akụ, igbe, nkọwa ma ọ bụ ederede pụta ìhè. Nhọrọ ndị a dị mgbe ọ bụla anyị chọrọ idezi nkọwa.
Emere Mmetụ Mmetụta ọnụ iji chekwaa ọrụ na ngwa njikwa kwa ụbọchị dị ka Evernote. Anyị na-atụ anya na ndị mmepe ga-ewepụ echiche ha iji chọta atụmatụ ọhụụ n’oge adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ihe anyi ga - eji Touch Bar mee n’ime mmemme Evernote
Zere ọkọ ndị dị n'elu Siri Remote na vinyls ndị a